တစ်လှူမှ သည် နှစ်လှူ အသိပေးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » တစ်လှူမှ သည် နှစ်လှူ အသိပေးခြင်း
Posted by ကထူးဆန်း on Jul 19, 2012 in Events/Fundraise, Myanmar Gazette | 45 comments
ရွာသူား တို့ကို အသိပေးရမဲ့ အချိန် ရောက်လာလို့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်သွေးချင်းများအတွက် လက်ဆောင် ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မော်လူးခရိုင်မှ ပထမ မူလခေါင်တုန့်စည်ရွာ ၏ ကျေးရွာ မှုလတန်းဆောက်လုပ်မှု့တွင် သွပ် နှင့် တကွ လိုအပ်သည်များ အတွက် လှုကြမယ် ဆိုသည်နှင့် ပါတ်သက်၍ အသိပေးလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒီရက်များ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွာသား ကိုထွန်းဝင်းလတ် နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမှု့ နှင့် ၄င်း ကျောင်းကို ဦးစီးခေါင်းဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဘုန်းဘုန်း ဦးကာလိန္ဒ နဲ့ပါ အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်သွယ်မှု့ ရခဲ့ပါသည် ။
ဒီနေ့ ကျနော် စာသင်ကျောင်းလေးကို တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့
မော်လှုး သည် မန္တလေး နှင့် လမ်းသင့်နေသည့် အတွက် မန္တလေး မှ လိုအပ် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယှုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရွာသားကြီး ကိုပေ နှင့် ရွာသူ မHnin Phyu တို့ထံ ကျွန်တော် အီးမဲ ပို့ခဲ့ပါသည် ။ မHnin Phyu ထံ ပို့သော အီးမဲ လိပ်စာ မှား၍ သော်၎င်း ၊ မ Hnin Phyu မဖတ်မိ၍ သော်၎င်း မHnin Phyu ထံမှ ပြန်စာ မရရှိခဲ့ ၍ ကိုပေ အား ဆက်လက် အကူ အညီတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ကိုပေ မှလည်း ချက်ခြင်း သိလိုသော ဈေးများ သွားစုံစမ်းပေးခဲ့ပါသည် ။
၄င်းအပြင် ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရသော လေးပေါက်ကိုလည်း ထုံးစံအတိုင်း အပူကပ် ရပြန်ပါသည် ။ လေးပေါက်မှ ဘာမှ အားမနာ ပါနှင့် ဆိုကာ အားတက်တရော ကူညီပေးပါမည် ပြောခဲ့၍ ကျွန်တော်များစွာ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက် စိတ်အေးခဲ့ရပါသည် ။
ဘုန်းဘုန်း ဦးကာလိန္ဒ တို့ လိုအပ်သော သွပ် သံ များဝယ်ယူပြီးပါက အလှုငွေ အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေပါသောကြောင့် လိုအပ်သည်များ ထပ်မေးခဲ့သည့် အတွက် အောက်ပါတို့ကို ကျွန်တော်တို့ လှုဒါန်း မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရွာသူား များကို အသိပေးအပ်ပါသည် ။
(၁) ဖုိင်ဘာ(သို့) ပလပ်စတစ် ရေလောင်းအိမ်သာ အိုး .. ၃ လုံး
(၁၁) ပြောင်သွပ် .. ၁၀ ချပ်
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ ရခိုင်သွေးချင်းတို့အတွက်လက်ဆောင် စုစုပေါင်း ကောက်ခံရရှိငွေ ၄၂၆၁၈၀၀ (လေးဆယ့်နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာ ) မှ ရခိုင် အသင်း သို့ ၃၂၀၀၀၀၀ ( သုံးဆယ့်နှစ်သိန်း ) လှုဒါန်းပြီး ပိုငွေ ၁၀၆၁၈၀၀ (ဆယ်သိန်း ခြောက်သောင်း တစ်ထောင့် ရှစ်ရာ ) အား လေးပေါက်ထံသို့ ၁၇-၀၇-၂၀၁၂ တွင် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် လွှဲပို့ခဲ့ပါသည် ။
အနှစ်ချုပ်ရပါသော် ယခု ကျွန်တော် တို့ ရွာ့ စုပေါင်း ကျောင်းအလှု အတွက် မန္တလေး သား လေးပေါက် နှင့် ကိုပေ တို့မှ အပင်ပန်းခံဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် မော်လူးတို့ တင်ပို့ပြီးပါက ရွာသား ကိုထွန်းဝင်းလတ်မှ ဆက်လက်တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရွာသူား တို့ ကြည်နုး သာဓု ခေါ်ကြ နိုင် ရန် ပြင်ထားဖို့ နိုးဆော် အသိပေးလိုက်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ ။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့၏ One Candle အဖွဲ့ကြောင့် သိခွင့် ရ လှု ဖြစ်လိုက်ရသည့် အတွက်လည်း ကိုထွန်းဝင်းလတ် နှင့် One Candle အဖွဲ့ သား ၊သူ များ အားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည် ခင်ဗျာ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကိုထူးဆန်းရေ။
ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာနဲ့ ဖြစ်မြောက်သွားတဲ့ဒီအလှူလေးအတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ် ။။
အင်မတန့် ကို ကြည်နူးစရာကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြလေပြီ။
ဝမ်းသာစရာပ ကိုထူးဆန်း …
အင်မတန် ခေါင် လှတဲ့ နေရာလေး မှာ အကျိုးပြု ပေးနေတဲ့ ကိုထွန်းဝင်းလတ် နှင့် One Candle အဖွဲ့ အားလုံး ကလေးများ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
17-7-2012 နေ့မှာ ကိုထူးဆန်းလွှဲလိုက်တဲ့ အလှူငွေကမ္ဘောဇဘဏ်မှာရောက်လာပါတယ်။
ကျနော် ဂေဇတ်ကိုသိတာ ၂ နှစ်ခွဲလောက် ။ DVB ကြည့်ရင်းသိတာပါ…။ ဒါနဲ့ မန်ဘာဝင် စာရေး။ ပြီးတော့ ကျနော် အဆက်ပြတ်သွားတာ ကြာပေါ့ ..။အြေ့ခအနေတစ်ခုကြောင့်ပါ..ခုမှ ပွိုင့် ၃၀၀၀ ကျော်ပဲရသေးတယ်.(တဂျီးရက်စက်တာ..၀င်ဝင်ချင်း ၅၀၀၀ မပေးသေးလို့ ) ။ အဲ..အဲဒီတုန်းက ဒါမျိုးအလှူအတန်းတွေ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ မန်ဘာချင်းတောင် အပြင်မှာတွေ့ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ယူနေ၇တယ်.။..။ ခုတော့ ဒီလိုအလူတွဖြစ်မြောက်လာတာ တကယ်ကို အားရကျေနပ်မိတယ်။ ကျနော်လဲ တစ်ပြားမှကို မလူလိုက်ရပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ ဂေဇတ်က လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပြီဆိုတဲ့ အတွေးက ကျနော်ရင်ကို ပီတိနဲ့ ကျေနပ်နေမိတယ်..။ …..ဦးဆောင်ဦးရွက် စီစဉ်သူတွေကို လေးစားလျက်…..။
ဒါနဲ့ … ကျနော်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပရဟိတ အတန်းတစ်ခု ဖွင့်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်..။ ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်ပဲလိုပါတယ်။ ကျန်တာ ကျနော် အကုန်ခံပြီး စီစဉ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း….။
ကိုထူးဆန်း ၊ ကိုပေါက် ၊ ကိုပေ နှင့် ကိုထွန်းဝင်းလတ် ၊
စပေးလိုက်တဲ့ ကိုထူးဆန်းရော..အားတက်သရောကူညီကြတဲ့ မန်းလေးက ကိုပေါက်ပေတို့ကိုရော
လေးပေါက်၊ ကိုထူးဆန်း၊ ကိုပေ၊ ကိုထွန်းဝင်းလတ်နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသူများအားလုံးကို သာဓုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် …
ပို့စ်ဖတ်ရင်းတောင် ကြည်နူးရပါတယ် ….. ။ သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုထူးဆန်းရေ ။
…ကချင်ပြည်နယ် မော်လူးခရိုင်၊ပထမ မူလခေါင်တုန့်စည်ရွာ
အလှူတွေကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ရွာသူားတွေ နဲ့
ကျေးဇူးတင် ကြည်နူးစွာ အားပေးနေပါကြောင်း ….
လေးပေါက်ရေ ကျွန်တော်တို့ တန်ဆာခပါ ရှင်းပေးလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် လေးပေါက်ထံ အီးမေး ပို့ထားပါသည် ။
ပထမ မူလခေါင်တုန့်စည်ရွာ ၏ ကျေးရွာ ကလူတွေလဲပျော်နေကြမှာဘဲလို့တွေးမိယုံနဲ့
ဒီပို့စ်အောက်မှာပဲ ၀င်ပြီး အကူညီတောင်းလိုက်ပါဦးမယ် ကျေးဇူးပြုပြီး Admin ကြီးခင်ဗျ ကျတော်ပို့်စ်အတွက် စာရေးသည့်အခါဝယ် ရေသောစားများမိမိကိုယ်ကိုယ်မမြင်ရပါဘူး message body မှာပါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရေးရင်အဆင်ပြေနိုင်လည်းဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပေးပါနော် သတင်းတွေ သိုးနေတော့မှာမို့ပါ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ မမြင်ရတော့ရေးမရလို့ပါ သိသူများ ရွာသူရွာသားများလည်း ဖေးမကူညီပါဦးဗျာ… ဒါန့်ဒါန့်ဒန် cherrylandlay@gmail.com သို့လည်း ပေးပို့ပြောပေးလို့ရပါတယ်
anybody ရေ .. ပိုစ်တင်တာက ရေးတဲ့စာ မမြင်ရဘူးဆိုတာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လဲမပြောတတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပိုစ်အသစ်တင်ရင် log in ၀င် Dashboard ထဲရောက်သွားမယ် ။
ကိုထူးဆန်းရေရွှေကြည်လည်းအဲလိုဖြစ်နေတယ် selection ပေးမှမြင်ရတယ်။ ပထမပို့စ်မှာစာထပ်သွားတာအဲဒါကြောင့်။ ကော်နက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ပေါ်လာတဲ့ page ကလည်းတမျိုးကြီးပဲ။ publish တောင်မနည်းရှာယူရတယ်။ အဲဒါအမှန်လို့ထင်နေတာနောက်တခါဝင်ကြည့်မှမတူဘူးရယ်။ (HTML နဲ့ဆိုမြင်ရပါတယ်)
ကိုထူးဆန်းနဲ့ ဦးဦးပါလေရာတို့ရဲ့ အစပြုမှုကနေ ကုသိုလ်ဆင့်ပွားရလိုက်တာကြောင့် သာဓုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိပါတယ် ။
(နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေး အရီးလတ်မမြင်ပါစေနဲ့… )
မျက်မှန်ကြီးတပ်ထားမှတော့ မမြင်ဘဲ နေပါ့မလား ကိုကြီးပါရယ်။
ဒီနေ့ပထမအကြိမ်အဖြစ် သွပ်ပြားနဲ့ သံတွေဝယ်ပြီး မော်လူးလှည်းခေါင်းထံအပ်ပေးလိုက်ပါပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါသည် လေးပေါက်နဲ့ ဆြာပေရေ ။
ကျုပ်အထင်ကတော့ ယူနစ်အိုင်တန်ပရိုက် တစ်ခုခြင်းဈေးနှုံးလို့ခေါ်မလား
ပန်းတနော်ဆေးရုံ အလှူတုန်းက နင် နှစ်ထောင့်ငါးရာ တိတိလှူဒယ်လေကွာ။ အလှူစာရင်းမှာ ပြန်ကြည့်ပါလား။ နင်မပေးဘဲနဲ့ ဘယ်သူက ကြားချောင်အိပ်စိုက် ဝင်ထည့်သွားမှာလဲ။ ပြောတော့ပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ..ရွာထဲမှာ အရင်ဘဝက နင့်အမေဖြစ်ခဲ့သူ ရှိဂျင်လည်း ရှိဗေမပေါ့…။
((( ပြောတော့ပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ..ရွာထဲမှာ အရင်ဘဝက နင့်အမေဖြစ်ခဲ့သူ ရှိဂျင်လည်း ရှိဗေမပေါ့…)))
ဘပုရေ .. ကျွန်တော်တို့လက်ကျန် ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်မှာ မို့လို့ အဲ့ဒီ့ ပစ္စည်း တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထပ်အလှုမခံတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ အားလုံးပြီးမှ စာရင်း ရှင်းတန်း တင်ပါ့မယ် ။ ကျောင်းသားလေးတွေ အတွက့် ထပ်လိုမဲ့ ပစ္စည်း .. ဥပမာ ..စာရေးစာပွဲခုံ ၊ ခုံရှည် တို့ ကျမှသာ ဘယ်လောက်ကျမယ် ဆိုတာ တင်ပေးပါ့မယ် ။ အောက် ခင်းဖို့ ဘိလပ်မြေ စသဖြင့် ပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ကို တွက်ပေးပါ လူချင်သူများ ရှိပါက ထပ်လှုနိုင်အောင်ပါဆိုပြီး မေးထားပါတယ် ခင်ဗျ ။
အလှူတစ်ခုကို ရည်ရွယ်တာကနေ နှစ်ခုကိုလှူဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက် အထူးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ပါတယ် ကိုထူးဆန်းရေ။
အခုလို စိတ်အားလူအားဖြင့်ကူညီပေးကြသော ဦးထူးဆန်း၊ ကိုထွန်းဝင်းလတ်နှင့် ပါဝင်ကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…